(21+) Caligula မွနျမာစာတနျးထိုး
DarkSide Production ကနေ နောကျတဈခါ တငျဆကျလိုကျတာကတော့ Adult Movie ဆရာကွီး ဒါရိုကျတာ Tinto Brass ရဲ့ ဂန်ဓဝငျ ရုပျရှငျ တဈကားပဲ ဖွဈပါတယျ... ကွာမွငျ့ခြိနျ ၂ နာရီကြျောပွီး တဈကားလုံး လိုလို လိငျဆကျဆံခနျးတှေ ပွညျ့နှပျနပေါတယျ…
အားလုံး တောငျးဆိုကွတဲ့ ရောမ ကားဆိုတာ ဒီလိုကားမြိုးပဲ ဖွဈပါတယျ.. ကားလေးကတော့ IMDb 5.4/10 ရထားတဲ့ drama/ erotic/ history ဇာတျလမျးလေးပဲ ဖွဈပါတယျ. ဒီ ဇာတျကားလေးကတော့ ရောမခတျေ
လူနမှေု စရိုကျနဲ့ အုပျခြုပျမှု ပုံစံတှေ.အုပျခြုပျသူရဲ့ အာဏာအသုံးခမြှု တှေ ...မိသားစု ကိစ်စတှကေို ပှငျ့လငျးစှာ ပွသထားမှာပါ.
ဒီကားလေး‌က ရောမခတျေ ဆီဆာတှရေဲ့ စိတျနစေိတျထားကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ရိုကျကူးတငျပွထားတာကွောငျ့ ရောမတို့ရဲ့ သမိုငျးကို စိတျဝငျစားနှဈသကျတဲ့ ပရိတျသတျကွီးကို အကွိုကျတှေ့ နှဈသကျစမှောပါ....ထို့အပွငျ erotic typeထဲမှာ ပါနတောကွောငျ့ လိငျမှုကိစ်စတှေ လိငျနဲ့ပကျသကျတာတှကေို ပှငျ့လငျးစှာ ရိုကျကူးပွသထားမှုကွောငျ့ အသကျ 21အောကျနှငျ့ မိသားစုဝငျမြား
အတူယှဉျတှဲ မကွညျ့သငျ့ပါ ခငျဗြာ
(21+) Caligula မြန်မာစာတန်းထိုး
DarkSide Production ကနေ နောက်တစ်ခါ တင်ဆက်လိုက်တာကတော့ Adult Movie ဆရာကြီး ဒါရိုက်တာ Tinto Brass ရဲ့ ဂန္ဓဝင် ရုပ်ရှင် တစ်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်... ကြာမြင့်ချိန် ၂ နာရီကျော်ပြီး တစ်ကားလုံး လိုလို လိင်ဆက်ဆံခန်းတွေ ပြည့်နှပ်နေပါတယ်…
အားလုံး တောင်းဆိုကြတဲ့ ရောမ ကားဆိုတာ ဒီလိုကားမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်.. ကားလေးကတော့ IMDb 5.4/10 ရထားတဲ့ drama/ erotic/ history ဇာတ်လမ်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်. ဒီ ဇာတ်ကားလေးကတော့ ရောမခေတ်
လူနေမှု စရိုက်နဲ့ အုပ်ချုပ်မှု ပုံစံတွေ.အုပ်ချုပ်သူရဲ့ အာဏာအသုံးချမှု တွေ ...မိသားစု ကိစ္စတွေကို ပွင့်လင်းစွာ ပြသထားမှာပါ.
ဒီကားလေး‌က ရောမခေတ် ဆီဆာတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရိုက်ကူးတင်ပြထားတာကြောင့် ရောမတို့ရဲ့ သမိုင်းကို စိတ်ဝင်စားနှစ်သက်တဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို အကြိုက်တွေ့ နှစ်သက်စေမှာပါ....ထို့အပြင် erotic typeထဲမှာ ပါနေတာကြောင့် လိင်မှုကိစ္စတွေ လိင်နဲ့ပက်သက်တာတွေကို ပွင့်လင်းစွာ ရိုက်ကူးပြသထားမှုကြောင့် အသက် 21အောက်နှင့် မိသားစုဝင်များ
အတူယှဉ်တွဲ မကြည့်သင့်ပါ ခင်ဗျာ
Link - https://mkvlinks.xyz/PWPj